Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPrasert
I-Atta Residence yeyona villa intle ibekwe kwiKhosi yeGalufa yaseKirimaya, eKhaoyai, eThailand.
Yonwabela umoya omtsha kunye nesibhakabhaka esiluhlaza sase-Khao Yai ngokukhwela ibhayisekile kwindawo yonke. Ubusika buyeza ngoku, iqondo lobushushu apha lingaphantsi kwe-20 c kusasa! Ungaphosi.
I-villa yethu ye-luxury luxury (eneendawo ezingaphezu kwe-350 sq m.) inombono omangalisayo we-Khao Yai (iintaba ezinkulu) phambi kwegumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala elikhulu.
Undwendwe lwethu lungonwabela izixhobo zehotele yaseKirimaya ezifana nephuli yokuqubha, indawo yokuzivocavoca kunye nendawo yokutyela (iindleko ezongezelelweyo ezibizwa yihotele). Ukuhamba ngebhayisekile kwindawo simahla njengoko sibonelela ngeebhayisekile ezi-2 zakudala. I-intanethi ye-Wifi yasimahla ngaphakathi kwi-villa. I-Cable TV (iphakheji ye-Truevisions Platinum) kunye nomdlali we-Blu-Ray (kunye neefilimu ezingaphezu kwe-20 ze-blockbuster) nazo zinikezelwe.
I-villa yethu ibekwe kwiKhosi yeGalufa yaseKirimaya yenye yezona ndawo zintle yegalufa eThailand. I-Khao Yai National Park (enye yeLifa leMveli yeHlabathi) nayo i-7 yeekhilomitha kuphela (imizuzu emi-3 yokuqhuba) ukusuka kwindawo yethu.
Umbuki zindwendwe ngu- Prasert
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nakhon Ratchasima